LAYAAB: Todobadaan Magaalo Ee Maanta Cajiibka Ah Ma Jirin 60 Sanno Ka Hor (Sawirro) | shumis.net
Home » bilicda somali » News » LAYAAB: Todobadaan Magaalo Ee Maanta Cajiibka Ah Ma Jirin 60 Sanno Ka Hor (Sawirro)
LAYAAB: Todobadaan Magaalo Ee Maanta Cajiibka Ah Ma Jirin 60 Sanno Ka Hor (Sawirro)
Qaar ka mid ah magaalooyinka ugu soo jiidashada badan adduunka lama micno ahan inay cimri ahaan yihiin magaalooyin qadiimi ah… Waxaan halkaan idinkugu heynaa todobo magaalo oo aan jirin 60 sanno ka hor kuwaasoo maanta ka mid ah magaalooyinka ugu bilicda wanaagsan adduunka.
Dubai – Waxaa laga yaabaa inay lama filaan kugu noqoto sababtuna waxay tahay Dubai waa magaalo weyn oo caan ah waqtigaan, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in aysan jirin muddo 60 sanno ka hor ah. Waxaana haatan dadka degan lagu qiyaasaa in ka badan 2.2 milyan oo shaqsi. Sannadkii 1971dii ayaana loo wanqalay.
museumofislamicartsparkDoha – Waa caasimadda dalka Qatar taasoo 2022ka martigelin doonta inta badan ciyaaraha Koobka Adduunka, shabakadda Forbes Magazine ayaa sannadkii 2013kii waxay dalka Qatar u magacawday dalka ugu taajirsan adduunka malaha waa sababta ka dambeysa kobaca Doha oo an caasimad aan jirin 60 sanno ka hor. Sannadkii 1963dii ayaana magacaan loogu wanqalay magaaladaan.
Markii ay degeen dagaalladii sokeeye ee dalka Nigeria, waxay dadka degan dalkaas dhisteen caasimad cusub waxaana magacaan loo bixiyey sannadkii 1960kii markaasoo ay xornimada ka qaateen nited Kingdom.
Maanta Abuja waa mid mid ah magaalooyinka ugu qurxoon Africa laakiin dhismaheeda waxaa la dhammeystiray 1991dii.
Astana – Hore waxaa magaaladaan loogu aqoon jiray Tselinograd waxaana lagu dhawaaqay magaceeda 1961dii. Intii lagu jiray waayihii Midowga Soofiyeeti ayey caan aheyd. Laakiin markii ay Kazakhstan xornimo buuxda qaadatay 1991dii dadku waxay ka bedeleen magacii ahaa Tselinograd waxaana loogu wanqalay Astana.
Navi Mumbai – Inta badan dadku waxay magaaladaan ugu yeeraan Mumbai, laakiin waxaa si gaar ah loo calaameyn karaa in aysan badanaa u aqoon magaceeda dhammeystiran Navi Mumbai.
Waa laba magaalo oo ku yaalla India, xiriir ayey leeyihiin midba midka kale. Mumbai ayaa xadkii loogu talogalay degaan ahaan gaartay dabayaaqadii 1972dii, markaasoo la ballaariyey laguna daray Navi. Haatan dadka degan waxay gaarayaan 12 milyan.
Incheon – Incheon waa magaalada seddaxaad ee ugu weyn dalka South Korea, waxaa ku nool ku dhowaad seddax milyan oo shaqsi. Laakiin sannadkii 1994tii ayuu bilowday dhismaheedu, waxayna saadaashu tahay inay 2020 noqoto magaalo dhammeystiran dhankasta.11c_kaecconstruction
King Abdullah Economic City – Ma ahan oo keliya in magaalada King Abdullah Economic City aysan jirin 60 sanno ka hor, laakiin arrinta qariibka ah waxay tahay in mashruuca dhismaheedu uu bilowday 2005tii markaasoo si rasmi ah loogu dhawaaqay. Waxaa la dhammeystiri doonaa dhismaheeda 2020ka. Waxayna magaaladaani ku taallaa Saudi Arabia ku dhowaad laba milyan oo shaqsi ayaana dhegan. Si gaar ah waxaa loo calaameyn karaa in dhismaheeda uu ku baxay qarash dhan 100 bilyan oo dollars.
Title: LAYAAB: Todobadaan Magaalo Ee Maanta Cajiibka Ah Ma Jirin 60 Sanno Ka Hor (Sawirro)